रअ टोली नेपालमा : देउवा गए भेट्न, प्रचण्डलाई आए भेट्न -
२०७६, ७ श्रावण मंगलवार ०८:१० July 23, 2019 clickonLeaveaComment on रअ टोली नेपालमा : देउवा गए भेट्न, प्रचण्डलाई आए भेट्न
नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतीय गुप्तचर संस्था रिर्सच एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) को टोली सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त रह्यो।
रअको टोलीले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेतासहित संसदका विभिन्न समितिका पदाधिकारीसँग सामूहिक र छुटाछुट्टै भेटवार्ता गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतवार राति भेटवार्ता गरेका रअ अधिकारीले सोमबार विहान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको हो।
रअ प्रमुख समान्तकुमार गोयल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोली आइतवार दिउँसो काठमाडौं आएपछि भेटवार्तामा जुटेको थियो। भेटघाटका लागि नेता देउवा स्वयं लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए भने प्रचण्डलाई भेट्न राका अधिकारी प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए।
दूतावास स्रोतका अनुसार आइतवार साँझ ७ बजेर ४० मिनेटमा दूतावास पुगेका देउवा करिव चार घन्टापछि राति ११ बजेर ४० मिनेटमा बाहिरिएका थिए। देउवासँगको भेटमा काँग्रेस सांसदद्वय डा. अमरेशकुमार सिंह र विनोद चौधरी पनि सहभागी रहेकाे बताइेकाे छ। रअ अधिकारीको सम्मानमा दूतावासले आइतवार साँझ दूतावास परिसरमा रात्री भोज दिएको थियो। सोही जमघटमा देउवा सहितको टोली दूतावास पुगेको हो।
रअ प्रमुख गोयल सहितको टोली बौद्धस्थित हायात होटलमा बसेको छ। देउवासँगको भेटवार्ता अघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका पदाधिकारी हायल होटल पुगेर रअ अधिकारीसँग सामुहिक भेटघाट गरेका थिए। गोयल नेतृत्वको टोलीमा राको तर्फबाट नेपाल डेक्स नियाल्ने अरुण जैन, सोही संस्थाका उच्च अधिकारी शशीभूषण सिंह, भारतीय मन्त्रिपरिषद् नियाल्ने एक सचिव समेत सहभागी रहेका थिए।
सोमबार विहान खुमलटार पुगेको रा टोलीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा साढे दुई घन्टा भन्दा बढी समय विताएको छ। विहान साढे आठ बजे शुरु भएको भेटवार्ता १० बजेर ५० मिनेटसम्म चलेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ। सत्तारुढ दलभित्र सत्ता नेतृत्व हेरफेर हुने वहस चलिरहेका बेलाको यो भेटवार्तालाई नेकपा पदाधिकारीले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन्। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरणले प्रचण्डलगायत अन्य नेतालाई भेटेर फर्किएको एक महिना बित्न नपाउँदै भएको यो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा लीएको नेकपाका एक नेताले बताए।
यसैबीच रअ टोलीले सोमबार अपरान्ह प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिसँग पनि सामूहिक भेटवार्ता गरेको छ। दुवै संसदका सबै समिति सभापतिलाई डिनर सहितको भेटवार्तामा बोलाइे पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती र महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पाल भने व्यस्तताको कारण जनाउँदै सो जमघटमा सहभागी भएनन्।
उनका अनुसार सोमबारको जमघटका लागि दूतावासले डेढ साता अघि नै निम्तो पठाइेको थियो। सो जमघटमा सत्तारुढ दलकी सांसद पम्फा भुसाल, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलगायका अन्य केही सांसद पनि सहभागी हुनुभएको दूतावासले जनाएको छ।
‘मिसन पूरा भएकोले’ रा टोली फिर्ता
पाँच दिनको भ्रमणका लागि नेपाल आएको टोली आकस्मिक रुपमा भ्रमण अवधि छोट्याएर सोमबार साँझ दिल्ली फर्किएको छ। समिति सभापतिहरुसँगको भेटवार्तालगत्तै रअ प्रमुख गोयल सहितका अधिकारी दूतावासबाट बाहिरिएको थियो।
दूतावासबाट हायात होटल पुगेको टोली त्यसलगत्तै साँझ त्रिभुवन अन्तर्‍ाष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको सुरक्षा निकायको उच्च स्रोतले जनाएको छ। सोमबारै फर्किनुको कारणमा स्रोतले भन्यो, ‘मिसन पूरा भएकोले थप बसिरहनु आवश्यक भएन।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिक
सत्याग्रह पाखुरा बटारेर हुन्छ ? यो के तमासा हो ? : प्रधानमन्त्री ओली
२०७५, ७ श्रावण सोमबार १७:३५ July 23, 2018 clickon
२०७४, २० मंसिर बुधबार १०:१९ December 21, 2018 clickon
अब धेरै पानी नपर्ने तर सचेत रहन आग्रह
२०७६, ३१ असार मंगलवार ०९:१९ July 16, 2019 clickon